अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाल सम्मकै उच्च बिन्दुमा सुनको मूल्य, नेपालमा कति पुग्थ्यो ? – Khabarhouse
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाल सम्मकै उच्च बिन्दुमा सुनको मूल्य, नेपालमा कति पुग्थ्यो ?
Khabar house | १७ बैशाख २०७७, बुधबार १५:५८ | Comments
काठमाडौं : को;रोना भा;इरसको सं;क्रमण नियन्त्रणका लागि गत चैत ११ गतेदेखि सरकारले लकडाउन गरेको छ। सो दिनदेखि नेपालमा अधिकांश व्यवसाय ठप्प छ। त्यसैगरी, सुनचाँदीको कारोबार पनि बन्द छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले लकडाउन नसकिएसम्म सुनको मूल्य सार्वजनिक नगर्ने भनेको छ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको दैनिक कारोबार भइरहेको छ। बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । बुधबार (अप्रिल २९) अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य प्रतिऔँस एक हजार ७१०.६१ डलरमा कारोबार भएर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। यस अनुसार यदि नेपालमा सुनको कारोबार खुलेको भए अहिले सुन प्रतितोला करिब ९२ हजार (करसहित) रुपैयाँ पुग्ने जानकारहरु बताउछन्। जुन हालसम्मकै उच्च मूल्य हुन्थ्यो।
यो पनि,बजेट अधिवेशन बोलाउने सरकारलको तयारी : सरकारले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारीका लागि बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीय संसद भवनमा रहेको बैठक कक्षको अवलोकन गर्न पुग्नुभयो। को’भिड–१९को संक्रमणको जो’खिम रहेको र यो अवस्थामा बैठक आह्वान गर्न सम्भव छ या छैन र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक कक्षको अवलोकन गर्नुभएको संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँगको परामर्शपछि स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको उहाँले बताउनु भयो । बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी सरकारले गरेपछि सचिवालयले पनि कोभिड–१९को रोकथामका लागि अपनाउनु पर्ने व्यवस्थाको तयारीलाई तिब्रता दिएको छ । कोभिड–१९को जोखिमका बिच सामाजिक दुरी कायम गर्दै स्वास्थ्यको दृष्टिले अपनाउने विषयमा ध्यान दिइएको सहप्रवक्ता धमलाले बताउनुभयो ।
त्यसका लागि सदस्यहरुको बसाइ एउटा सिट अल्टरनेट गर्ने, संयुक्त बैठकका लागि थप सिटहरु थप्ने लगायतको काम भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । त्यस्तै संसद भवनमा प्रवेश गर्दा डिसइन्फेक्सन गेट राख्ने, ज्वरो नाप्ने व्यवस्था गरिने तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । बैठक कक्षभित्र पनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सावधानी अपनाइने उहाँले बताउनुभयो ।
१५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम, प्रि बजेट लगायतका विषयमा समेत संसदमा छलफल हुनुपर्छ । त्यसैले लामो समयको लकडाउनका कारण समय कम भएकाले छिटो भन्दा छिटो अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा सरकार छ । सम्भवतः जेठको पहिलो साता अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । बजेट अधिवेशनको सुरु र अन्त्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोछ ।